'भ्रष्टाचार , कमिशनखोर , दलाल र माफियाहरुको अन्त्य गर्ने अभियानमा क्रियाशिल छौं'-मल्ल - Asian Samachar
‘भ्रष्टाचार , कमिशनखोर , दलाल र माफियाहरुको अन्त्य गर्ने अभियानमा क्रियाशिल छौं’-मल्ल
Asian Samachar बुधबार, पुस २०, २०७३ (11 months ago) अन्तर्वार्ता
झकबहादुर मल्ल अध्यक्ष , राष्ट्रिय युवा जनस्वयंसेवक । आफ्नो पुरानो सगोत्री माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार भइरहेका वेला विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी जनताको जनजिविकाको सवाल , मुलूकमा व्याप्त भ्रष्टाचार ,राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनता लगायतका मुद्दा उठाउदै चर्को आन्दोलनमा छ ।
केही दिन अघिमात्रै विप्लव स्वयंले मुलुक र जनताका लागि आवश्यक परे क्रान्तिकारी माओवादी र मसालसंग कार्यगत एकतासमेत गरेर जान सकिने बताएका थिए । प्रस्तुत छ, माओवादी आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण सारथी राष्ट्रिय जनस्वयंसेवकका केन्द्रिय अध्यक्ष झकबहादुर मल्लसंग एसिएन समाचारका लागि नरेश न्यौपानेले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश ।
यहाँको संगठनले केमा व्यस्त छ अहिले ?
हामी हाम्रो पार्टी नेकपा (माओवादी)को घोषित नीति वमोजिम उपत्यकालगायत देशभरी भ्रष्टाचार , कमिशनखोर , दलाल र माफियाहरुको अन्त्य गर्ने अभियानमा क्रियाशिल छौं । जनताका अगाडि यो देश सदियौंदेखि लुटिरहेका लुटेराहरु पत्ता लगाउने र तिनीहरुलार्इ नाङ्गेझार पार्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौ ।
उपत्यकामा अलि बढी सक्रियता हो ?
अवश्य , उपत्यकामा देशैभरिका मानिसहरु रहने र यो मुलुकको केन्द्र पनि भएकाले हाम्रा गतिविधि पनि बढी यतै केन्द्रीत छन् । पछिल्लो समयमा वाग्मती नदि सरसफाइ , नयाँ बसपार्कको सरसफाइ र व्यवस्थापनसंगै फुटपाथहरुको उचित प्रयोगबारे राजधानीबासीलार्इ जनचेतना जगाउने र स्वएम् युवाहरु अघि सरेर राजधानीको सरसफाइमा सहभागी भएका छौं । राजधानीलाई स्वच्छ , सफा राख्दा नेपालको पहिचान स्वच्छ र सफा हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।
तपार्इहरु वाग्मती सरसफाइका कुरा गर्नुहुन्छ । तर, मान्छेहरु सवैभन्दा बढी फोहोर सिंहदरबारभित्र थुप्रिएको छ भन्छन् नि ?
मैले तपाइले संकेत गर्न खोजेको कुरो बुझें , जुन निकै गम्भीर विषय हो । हो, त्यही फोहोर अन्त्यका लागि नै हो हाम्रो पार्टी र हाम्रो सङ्गठनले यसरी आन्दोलन गरिरहनु परेको । यस मुलुकलार्इ अनिर्णयको बन्दी बनाउने , अग्रगमन रोक्ने र विदेशी दलालहरुको नेपाललाई कृडास्थल बनाउने कुरामा त्यही फोहरकै महत्त्वपूर्ण हात छ । यसकारण ती दलाल , कमिसनखोर र विदेशी टट्टुहरुलार्इ तह लगाउने र सुशासन कायम गर्ने कुरामा हामी तल्लीन छौं । सामन्तवादका अवशेषहरु कहाँ–कहाँ लुकेर देश निचोरिरहेका छन् , त्यो पत्ता लगाउने र जनताका अगाडि फैसला गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।
यतिबेला संघियताको विषयलार्इ लिएर राजनैतिक दलहरु विभाजित छन् , यसलार्इ तपाइहरुले कसरी लिनु भएको छ ?
संसदवादी राजनैतिक पार्टीहरुले थालेको यो बेतुकको बहसलार्इ हामीले खासै चासो दिएका छैनौं । तर, यो देशको दीर्घकालीन विकाश र परिवर्तनको पाटोमा भने हामी निकै चिन्तित छौं । केवल सत्ता र कुर्सीका लागि भइरहने यस्ता फोहोरी संसदीय खेलमा हाम्रो खास रुचि पनि छैन । त्यसैले हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान मुलूकमा सामन्तवादको समुल अन्त्य कसरी गर्ने भन्नेमै बढी केन्द्रित छ । त्यसका लागि हामी खासगरी युवाहरुमा विचार निर्माण र विस्तार गर्ने अभियानमा छौ । यहाँ एउटा संघियता मात्रै होइन सबैखाले मानवीय उत्पीडनको अन्त्य हाम्रो यतिबेलाको मुख्य एजेन्डा हो ।
सिमांकनका सन्दर्भमा तपार्इको दृष्टिकोण त होला नि ?
यहाँ विडम्बना नै के भएको छ भने नेपालका केही राजनैतिक दल र नेताहरु सिमांकनका सन्दर्भमा आफैले शुरुमा उठान गरेको मान्यतामा समेत अडिग रहन सकेनन्। उनीहरुले सङ्घियताको आगमनको पाटो के थियो ? भन्ने नै बिर्सेका छन् । र, विदेशको इशारामा सिमांकन मात्रै हो र , देश नै सामन्तवादलाई बुझाउने भए कि कतै भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । त्यसैले , संघियता सुरुमा हामीले उत्पीडनमा परेका वर्ग , समुदाय , जातजाती , एवं क्षेत्रहरुको अग्रगती र प्रगतीलाई आधार बनाएर प्रदेशहरु निर्माण गरिनुपर्छ भनेका थियौ , आज पनि हाम्रो मान्यता त्यही हो ।
यतिबेला नेपालको राष्ट्रियता निकै खतरामा परेको भनिन्छ , यतातिर तपार्इहरुको क्रीयाशिलता देखिदैन नि ।
यो सत्य होइन , हाम्रो पार्टीको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता केही हो भने नेपालको राष्ट्रियता हो । देश जोगिन्छ कि जोगिदैन भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो । हाम्रो चिन्ता दिनदहाडै विदेशी दूतावास पुगेर कुर्सीको भिख माग्ने व्यक्तिवादी र स्वार्थीहरुबाट मुलुक बचाउने र स्वाधिनताको पक्षमा खरो पैरवी गर्ने हो, हामी अहिले त्यही गरिरहेका छौं । मुलुकमा समाजवादको बाटोमा लामवद्द हुने युवाहरुको जमात तयार गर्दै जनता जागरुक बनाउने अभियानमा हाम्रो सङ्गठन रातदिन नभनी क्रीयाशिल छ । वैज्ञानिक समाजवादले मात्रै विद्यमान संकट र अस्वस्थ शासन प्रणालीको स्थान लिन्छ । नेपालको हकमा संसदीय व्यवस्थाले राष्ट्रियता र जनतन्त्र वा प्रजातन्त्र दुवै वचाउन सक्दैन ।
सारमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ? माथिका प्रश्नभन्दा पृथक तपाईले वोल्नै पर्ने विषय ?
हेर्नुहोस , अब मुलूक युवाहरूले जोगाउनुपर्ने बेला आएको छ । नेपाललार्इ युद्धमा धकेलेर रणमैदान बनाउने र यसलार्इ विदेशीको परेड खेल्ने ठाउँ बनाउने साम्राज्यवादीहरुको सपना चकनाचुर बनाउनुपर्ने चुनौती हाम्रो सामु छ । हामीले अन्ततः वैज्ञानिक समाजवादकै बाटोमा जाने हो र त्यसका लागि माओवादी विचारधारामा आम युवाहरु गोलबन्द हुनुको विकल्प छैन ।
तपार्इले भनेजस्तो गर्ने युवाहरु बाँकी छन र अब नेपालमा ?
त्यही त , यसको मूल कारण संसदवादी राजनैतिक दलहरुले गर्ने सत्ता र कुर्सीको खिचातानी हो । विदेशीको नाङ्गो हस्तक्षेप हो । सरकारमा बसिरहनेहरुले रोजगारीमा र विकासमा ध्यान नदिने भएपछि युवाहरु विदेशिनु स्वभाविक छ । तर, अब त्यो रोक्न जरुरी छ ।